ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းငယ် (Depression) ကို လိမ္မော်ရောင်အဆင့် သတ်မှတ်ထား၊ြ? - Yangon Media Group
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းငယ် (Depression) ကို လိမ္မော်ရောင်အဆင့် သတ်မှတ်ထား၊ြ?
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းငယ် (Depression) ၏လက် ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့်အခြေအ နေရှိနေသဖြင့် လိမ္မော်ရောင်အဆင့် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းကို ဝင်ရောက်နိုင် ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ မိနစ် ၃ဝ အချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ် နေသောမုန်တိုင်းငယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်းမြို့၏ အနောက် တောင်ဘက် မိုင်(၁၁ဝ)ခန့်၊ ဟိုင် ကြီးကျွန်း၏အနောက် တောင် ဘက် ၂၃၅မိုင်ခန့်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပို့ပလဲယားမြို့၏ အနောက်မြောက် ဘက်မိုင် ၈ဝ ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေကြောင်းသိရသည်။
မုန်တိုင်းငယ်၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေ အနေရှိနေသဖြင့် လိမ္မော်ရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး မုန်တိုင်းငယ်သည် မြောက်-အရှေ့ မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့ လျားနိုင်ကာ လာမည့် ၁၂နာရီ အတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသို့ လျော့သွားနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းထား ကြောင်းသိရသည်။ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှထွန်းက ”အခုအချိန်အထိ တော့ လိမ္မော်ရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်အား လျော့နိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီးနှစ်ခုအစပ်ကိုရောက်နိုင်တယ် လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ အားလျော့မယ့် အခြေအနေရှိပါတယ်။ မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကနေလေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းကို အားလျော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာကြောင့်တော့ မိုးရွာ နိုင်တယ်ပေါ့။ လက်ရှိအခြေအနေ မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း တွေအထိ မိုးရွာနေတာရှိပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မုန်တိုင်းငယ်၏အရှိန်ကြောင့် ယနေ့ နေ့လယ်မှ နောက် ၄၈နာရီ အတွင်း နေပြည်တော်၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်မှ နေရာအနှံ့အပြားနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျားမှ နေရာ ကျဲကျဲမိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ အချို့ နေရာများတွင်နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ရခိုင်ကမ်းရိုး တန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးမည်၊ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၄ဝအထိတိုက် ခတ်နိုင်ပြီး လှိုင်းအမြင့်မှာမြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ် လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ် ပြင်တို့တွင် ရှစ်ပေမှ ၁ဝပေခန့်ရှိ နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်၏အရှိန် ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်သဖြင့် ပြင်တွင်း လေကြောင်းပျံသန်းရေးနှင့် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီးကမ်း ဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘော များအနေဖြင့် ကြိုတင်သတိပြု ရှောင်ရှားကြရန် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက အကြံပြုတိုက်တွန်းထားသည်။ မုန်တိုင်းအရောင်သတ်မှတ် ခြင်းမှာအဝါရောင်သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်းဖြစ် ပေါ်နေသည့် အခြေအနေဖြစ်ပြီး လိမ္မော်ရောင်သည် မုန်တိုင်းသည် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်နေသည့် အခြေအနေဖြစ်ပြီး၊ အနီ ရောင်သည် မုန်တိုင်းသည်ကမ်းရိုး တန်းသို့ ၁၂ နာရီအကြာတွင်ဝင် ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ရှိ နိုင်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားပြီး အညို ရောင်သည် အန္တရာယ်ကျရောက် ပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ခံစားနေရသည့် အခြေအနေသတ်မှတ်ထားပြီး အစိမ်း ရောင်သည် မုန်တိုင်းဖြတ်ကျော်သွား ပြီး အခြေအနေဖြစ်သည်။
လူသေဆုံးမှုနှင့် ပြည့်ကျပ်မှုများရှိခဲ့ပြီးနောက် ဧဝရက်တောင်တက် စည်းမျဉ်းများကို ပြောင်းလဲ??
ထန်းတပင် နည်းပညာစက်မှုဇုန် စီမံကိန်းအပါအဝင် စီမံကိန်းပေါင်း ၁၉ ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု??
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအသစ် ပွန်ပီယို၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ခရီးစဉ်စတင်